Home > COFFEE BAR!
(! လတ်ဆတ်တဲ့ကော်ဖီအမေရိကန်သာသင်္ဘောအခမဲ့အမေရိကန်ကနေအမေရိကန်ကိုတင်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်။ ) ကော်ဖီကောင်းတစ်ဦး, လတ်ဆတ်သောခွက်ကိုဖူး - သငျငယ်ချိုးထိုက်! ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ဖီအားလုံးအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အာမခံသစ်ကိုစပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်ကြသည်။ သင်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းကင်နှင့်ကြိတ်အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်။
ရောင်းဈေး € 76,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 164,08 ရောင်းချခြင်း
မှ € 14,50
8 PCs / ဂန္ထဝင်ပန်းသံမဏိကော်ဖီထက်တောင် Matcha လက်ဖက်ရည် Strring Spoon မီးဖိုချောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ထား
ရောင်းဈေး € 15,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 38,82 ရောင်းချခြင်း
60 Pack ကိုလူပျိုကော်ဖီ Capsule အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 49,50
Cone ပုံသွင်းသံမဏိကော်ဖီ Dripper နှစ်ချက်အလွှာကွက်ခြင်းတောင်းမူလစာမျက်နှာမီးဖိုချောင် Tool ကိုကော်ဖီဆက်စပ်ပစ္စည်း Filter
ရောင်းဈေး € 14,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 36,90 ရောင်းချခြင်း
ရောင်းဈေး € 29,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 76,74 ရောင်းချခြင်း
ဂန္ထဝင် Glass ကို Pot စက္ကူ 3Cups Pot 6Cups Pot ကော်ဖီဆက်စပ်ပစ္စည်း 40Pcs Per Bag စစ်ထုတ်ပေးစစ်ထုတ်ပေး
ရောင်းဈေး € 22,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 57,24 ရောင်းချခြင်း
6pcs / Refill Dolce Gusto ကော်ဖီ Capsule nescafe dolce Gusto ထုပ်ပိုးပြန်သုံးနိုင်သောဆေးတောင့် dolce Gusto တောင့ dolce Gusto ပြန်. ဖြည့်
ရောင်းဈေး € 15,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 39,36 ရောင်းချခြင်း
0.65L လျှပ်စစ်ယိုကော်ဖီသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုအိမ်ထောင်စုကော်ဖီစက်6ခွက်ကိုလက်ဖက်ရည်ကော်ဖီအိုး 220V Sonifer
ကနေရောင်းရန်တွင် € 61,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 131,04 ရောင်းချခြင်း